Jwxo-shiil oo Lagu Daaweynayo Isbitaalka The Orota Referral Hospital ee ku Yaal Magaalada Caasmara. – Rasaasa News
Mar 18, 2010 casmara, hospital, Jwxo-shiil
Rasaas – [casmara March 18, 2010] – Wararka ka imanaya dalka Eritrea ayaa waxay sheegaya in Jwxo-shiil, si lama filaan ah galinkii dambe ee shalay loo dhigay Isbitaal ku yaal magaalada Caasmara, halkaas oo takhaatiirtu isku dayayaan in ay ka dajiyaan cadaadiska dhiigiisa oo cirka maraya.
Sida uu noo soo sheegay wariyaha rasaas.com u jooga dalka Eritrea, Mr Jwxo-shiil, ayaa mudooyinkii ugu dambayayba xanuunsanaa, xanuunkaas oo uu ugu weyne xanuunka dhiig karka [high blood pressure] iyo xanuunka buufiska [depression] oo uu aad ula ildaraa, waxaa kale oo u dheer daltabyo weyn oo ay ugu wacan tahay hawada aadka u kulul ee Caasmara.
Xanuunka dhiig karka oo dhawr goor oo hore laggaga daweeyey dalka Ingriiska, ayaa hore wax loggaga qaban waayey dalka Eritrea, Mr Jwxo-shiil ayaa waxaa uu xiligan ku jiraa Isbitaalka ugu cusub uguna qalabka casrisan ee la yidhaahdo The Orota Referral Hospital, oo ku yaal Caasmara. Aad iyo aad ayey u adag tahay xaaladiisa Caafimaad
Jwxo-shiil, oo ay Eritrea hore ugu yeedhay, ayey u rogtay waqradii loogu yeedhay, waxayna ka qaaday baasaboorkii, waxaana korka ka ilaaliya si uusan uga bixin ciidanka booliska ee Eritrea. Xubnaha kooxdiisa ayuuna midna kaga sugnayn dalka Eritrea oo iyagu cidleeyey, Faysal Daahir [ina maryama agan] ayaa ahaa ninkii ugu dambeeyey ee ka soo baxsada Eritrea haatana ku sugan Nairobi.
Waxaan la hubin waxa ay ka yeeli doonto xukuumada Eritrea xaalada caafimaad ee liidata ee soo foodsaartay Jwxo-shiil, in loo qaado dalka Ingriiska iyo in ay ku sii hayndoonaan halkaas.